Akụkọ - gịnị bụ akwa Twill?
A na-etinye mkpọchi na weft dịkarịa ala otu oge, a na-agbakwunye mkpọchi mmiri na weft na-agbanwe ịgbanwe akwa ma na-akpọkọta ha ọnụ dị ka twill weave.
Ọdịdị nke akwa ahụ dị twill abụọ dị elu na akwa 45 Celsius ekpe, usoro nke twill n'ihu doro anya na azụ nke twill yi mara mma apụtaghị. Ọnụọgụ nke warp na weft dị nso na ibe ha, na njupụta dịtụ elu karịa ogo nke weft, aka na-enwe mmetụta dị nro karịa khaki.
Twill siri ike na ihe karịrị 32 (18 sentimita 18 ma ọ bụ ihe na-erughị) yarn owu maka ogwe aka na weft yarns; mma
A na-eji akwa yarill mee 18 dị obere ma ọ bụ karịa (32 sentimita ma ọ bụ karịa) ka ọ bụrụ akwa na weft. Twill na-acha ọcha, na-acha ọcha ma na-acha uhie uhie, a na-ejikwa ya dị ka akwa akwa, uwe egwuregwu, snịịka, akwa emerụ na oghere. Enwere ike iji bọọlụ buru ibu dị ka mpempe akwụkwọ wee nwee ike iji ya dị ka akwa akwa mgbe edechara ya. Colorcha na ụdị akwa Twill dị mma bụ electro-optically ma ọ bụ nke nwere ike iji ya dịka mesịa ma ọ bụ mkpachi uwe.
Oge nzipu ozi: Jul-06-2020